Ifulethi likanokusho e-Asuncion, INDAWO ENKULU! - I-Airbnb
Ifulethi likanokusho e-Asuncion, INDAWO ENKULU!
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Jessica
Ifulethi likanokusho elitholakala kalula kwenye yezindawo eziphephe kakhulu e-Asuncion nazo zonke izinsiza ezidingekayo. Iphuli, I-Private Parking, ne-WiFi, phakathi kwezinye izinto eziningi. Indawo iphephile, itholakala kalula, ukuhamba imizuzu emi-2 ukuya esitolo esikhulu (Superseis), imizuzu eyi-10 ukuya ezitolo ezinkulu (Paseo La Galeria, Shopping del Sol, Shopping Mariscal Lopez) kanye neWorld Trade Center, 15-20 imizuzu ukushayela ukuya enkabeni yedolobha.
Ilungele abantu abangafika kwabangu-3 (2 ku-Queen bed ekamelweni kanye no-1 kumbhede kasofa eGumbini Lokuphumula), kodwa ingakwazi ukuhlalisa abangu-4 ngomatilasi (okwengeziwe) uma kudingeka. Indawo inazo zonke izinsiza ozidingayo ukuze Upheke, Ugrill, ubukele i-TV, uxhumano lwe-inthanethi, Iphuli, Ijimu, Igumbi Lemidlalo, Indawo Yokupaka Ezizimele, Igumbi Lokuwasha (indawo evamile, okufanele ukhokhe), Okomisa Izinwele, I-ayina enetafula.
Indawo yase-Los Laureles iyamangalisa, iphephile, itholakala kalula, ukuhamba imizuzu emi-2 ukuya esitolo, imizuzu eyi-10 ukuya ezitolo ezinkulu (Paseo La Galeria, Shopping del Sol, Shopping Mariscal Lopez) kanye neWorld Trade Center, 15-20 imizuzu ukushayela. enkabeni yedolobha.
Mina noma othile ovela emndenini wami uzotholakala ukuze aphendule noma yimiphi imibuzo yakho kanye / noma ukuba lapho uma kukhona okukukhathazayo.